आज साउन १५ अर्थात खीर खाने दिन, यस्ताे छ साउनमा खीर खानुकाे महत्व ! - kageshworikhabar.com
आज साउन १५ अर्थात खीर खाने दिन, यस्ताे छ साउनमा खीर खानुकाे महत्व !
१४ श्रावण, काठमाण्डौ। श्रावण १५ गते आज नेपाली समाजमा खिर खाएर मनाइँदै छ ।
वर्षा ऋतुका बेला असार १५ गते दही, च्युरा र श्रावण १५ मा खिर खाने प्राचीनकालदेखिको नेपाली परम्परा छ । साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खिरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खिर खाने गरिएको हो । दूधमा मरमसलालगायत चिजबिज हालेर बनाइने खिरले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्ने भएकाले यसको परम्परा बसेको विश्वास गरिन्छ ।
श्रावण महिनामा गाउँघरमा पनि खेतीपातीको काम सकिन्छ । हरियाली बढी हुने भएकाले घाँस बढी पाइन्छ । राम्रा धेरै घाँस पाइने बेलामा गाई, भैँसीले पनि धेरै दूध दिन्छन् । दूध धेरै भएपछि इष्टमित्र, चेलबेटीलाई घरमा बोलाएर खिर खाने चलन चलेको हो ।
श्रावण भगवान् शिवको महिना हो । शिवलाई दूध र दूधमा बनेका परिकार मनपर्ने भएकाले खिरलगायत मिठाइ विधिपूर्वक चढाइन्छ । यसैले गर्दा साउनको मध्य पारेर खिर खाने प्रचलन चलेको हुनसक्ने धर्मशास्त्रविद् गौतमले बताउनुभयो । तर यसको कुनै शास्त्रीय वचन भने छैन ।
Previous articleआज साउन १५ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
Next articleआजको मौसम : चार प्रदेशमा भारी वर्षा हुने, सतर्क रहन आग्रह